ရောင်းစားလည်း အပြစ် .တောင်းစားလည်း အပြစ် . ခိုးစားလည်း အပြစ် ..ဆင်းရဲမွဲတေမှုအတွက် ပြစ်ဒဏ်တွေ .
တစ်လအတွင်း အခြေအနေမဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်သူ ၁၁၇ ဦးကို ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အခြေအနေမဲ့ တောင်းရမ်း စားသောက်သူများကို မြို့နယ်များအလိုက် လမ်းဆုံလမ်းခွများ၊ ခရီးသည်တင် ယာဉ်လိုင်းများ၊ လူစည်ကားရာ လမ်းမကြီး...များနှင့် ဈေးများတွင် ပပျောက်ရေး စီမံချက်တစ်ခုအနေဖြင့် စိစစ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ မေလ ၅ရက်မှ ဇွန်လ ၅ရက်အထိ အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် ၃၇ဦး၊ အနောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၇၁ဦး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၂ဦးနှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တွင် ၇ဦးအား သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ “ဖမ်းမိတဲ့အထဲမှာ ယောကျာ်းကြီး ၁၅ယောက်နှင့် အမျိုးသမီးကြီး ၁၀ယောက် ပါတယ်။ ကျန်တာတွေက ကလေးတွေချည်းပဲ။ အခုဖမ်းတဲ့လူတွေကို အကုန်စိစစ်လိုက်ပြီး စည်ပင်ရဲကို ၉၂ဦး အပ်လိုက်တယ်။ ၂၅ဦးကို ပြစ်မှုနဲ့ အရေးယူလိုက်တယ်” ဟု သက်ဆိုင်ရာမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အခြေအနေမဲ့ တောင်းရမ်းစားသောက်သူများ ပပျောက်ရေးစီမံချက်တွင် ဖမ်းဆီးရမိသည့် လူများအား ပြစ်မှုဖြင့် အရေးယူခြင်း၊ လူမှုဝန်ထမ်းသို့ပို့ခြင်း၊ မိဘသို့အပ်နှံခြင်း၊ စည်ပင်သို့အပ်ခြင်းနှင့် စိစစ်၍ လွှတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့ရာ ယခုဖမ်းဆီးသည့် လူများတွင် စိစစ်၍ လွှတ်ပေးသည့် လူမရှိကြောင်းPopular News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 11, 2011 Links to this post
လမ်းဘေးဆိုင်များ၏ အမှိုက်ရမှဗိုက်ဝနေရတဲ့ မြန်မာပြည်ကသန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းများ၏ဘဝ
ရန်ကုန်မြို့ရှိ သန့်ရှင်းရေးဝန် ထမ်းများသည် ၄င်းတို့၏စားဝတ် နေရေးအတွက် လမ်းဘေးဈေးဆိုင် များ၏ စွန့်ပစ်အမှိုက်များအပေါ်သာ မှီခိုနေရကြောင်း အဆိုပါ ဝန်ထမ်းများ က ဆိုသည်။”စည်ပင်ကပေးတဲ့ တစ်နေ့ လုပ်ခ ၁၅ဝဝ ရတယ်။ အဲဒါကို ၅ ရက်တစ်ခါရှင်းပေးပါတယ်။
ကျွန်မက ထန်းတပင်က လာတာ ဆိုတော့ ဆိုက်ကားခ ၂ဝဝ၊ ကားခ ၄ဝဝနဲ့ဆို စုစုပေါင်းအသွားအပြန်စရိတ် တစ်နေ့ ၆ဝဝ ကုန်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ၉ဝဝ က လက်ဖက်ရည်သောက်တာ နဲ့ နေ့လယ် ထမင်း ဝယ်စားတာနဲ့ဆို ရင်ပဲ ကုန်ပါပြီ။ လုပ်ခနဲ့ ပဲဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဈေးဆိုင်တွေကို အမှိုက်သိမ်းပေးရလို့ မုန့်ဖိုးတစ်ဆိုင် ကနေ ၂ဝဝ ရရင် ၁ဝ ဆိုင်ဆို တစ်နေ့၂ဝဝဝ ရတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ဒီအလုပ်က မထွက်နိုင် ဖြစ်နေရတာပါ” ဟု လုပ်သက် ၁၂ နှစ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်သည့် သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ပြောသည်။ ယခုလမှစ၍ ရန်ကုန် စည်ပင် နယ်နိမိတ်မြို့တွင်း ၆ မြို့နယ်၌ ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် ဈေးရောင်း ချခြင်းကန့်သတ်တော့မည် ဆိုပါက ၄င်းတို့အတွက် ရရှိမည့် အပိုဝင်ငွေမှာ ထိခိုက်မှုများ ကြုံလာ နိုင်ကြောင်း သန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်း များက ဆိုသည်။”အခုလို လမ်းတိုင်းမှာ ဈေးသည်ရှိနေတဲ့ အချိန်တောင် ဈေးသည်ရှားတဲ့ နေရာမှာကျတဲ့ ဝန်ထမ်း တွေက အဆင်မပြေတာ။ လမ်းဘေး ဈေးသည်တွေကို ကန့်သတ်တော့ မယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်မတို့အတွက်ပါ ထိခိုက် မှုတွေရှိလာမှာပါ။
ဈေးသည် တွေဆီက မဟုတ်တဲ့ပုလင်းခွံ၊ ဘူးခွံ နဲ့ ဖိနပ်စုတ်တွေ တွေ့လို့ရောင်းရတဲ့ အပိုငွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒါက ပုံမှန်အပို ဝင်ငွေ မဟုတ်ပါ ဘူး။ ပြီးတော့ ဈေးသည်တွေဆီက လောက်လည်းမရပါဘူး”ဟု လသာ မြို့နယ်မှ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းတစ် ဦးက ဆိုသည်။အဆိုပါ သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း မျးအား ၆ လတစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် တစ်နှစ် တစ်ကြိမ် စသဖြင့် ဝန်ထမ်း လခတိုးပေးမှုမရှိသည့်အပြင် ဝင်ဝင် ချင်းလုပ်သားများနှင့် လုပ်သက်ရင့် လုပ်သားများ၏ လခမှာလည်း ကွာ ဟချက်မရှိသည့်အတွက် ၄င်းတို့မှာ ပြင်ပမှအပိုငွေကိုသာ အားကိုးနေရ သည်ဟု ဝန်ထမ်းများက ဆိုသည်။”အခု စစဝင်တဲ့အလုပ်သမား လည်း ဒီလုပ်ခပဲ။ ၉ နှစ် ၁ဝနှစ်ကြာ တဲ့ဝန်ထမ်းလည်း ဒီလုပ်ခပါပဲ။
ရုံးက ပေးတဲ့လုပ်ခကတော့ ဘာမှ ကွာဟ ချက်မရှိပါဘူး။ ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လာ တာ ၁၄ နှစ် ၁၅ နှစ်ရှိပြီ။ တစ်နေ့ ၂၅ဝ ပေးတဲ့ခေတ်ကတည်းက လုပ် လာတာ။ ဒါပေမဲ့ လုပ်သက်ရင့်တဲ့ အတွက် အပိုထပ်ဆောင်းပေးမှု ဘာမှမရရှိပါဘူး”ဟု ပန်းဘဲတန်းမြို့ နယ်မှသန့်ရှင်းရေး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ဆိုသည်။ လုပ်သက် ၁၅ နှစ်အထက် ဝန်ထမ်းများသည် လခစားသဘော ဖြင့် တစ်လလျှင် ၄ သောင်း ၉ ထောင်ရရှိ၍ စဝင်ခါစမှ ၁၅ နှစ် အထိ ဝန်ထမ်းများမှာ ငါးရက်ရှင်း တစ်ခါ ၇၅ဝဝ ကျပ် ရရှိသည့်အ တွက် အဆိုပါအုပ်စု ၂ စုအတွက် လုပ်ခကွာဟမှုမှာ တစ်လလျှင် ကျပ် ၄ဝဝဝ မျှသာရှိပြီး ၃၁ ရက်နှင့် ဆုံးသောလများတွင် ယင်းထက် နည်းသော ပမာဏ သာ ကွာဟ ကြောင်း သိရသည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါသန့် ရှင်းရေးအလုပ်မှာ အလုပ်ပြတ် တောက်သည့်အချိန် မရှိသည့်အ ပြင် အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်း ကန့်သတ်ချက်ကြီးမားစွာ မရှိသည့် အတွက် ပညာအရည်အချင်း နည်း ပါးသူများမှာ ယင်းအလုပ်အား ရွေးချယ်မှု များပြားကြောင်း သိရသည်။
”ဥပမာ ပန်းရန်အလုပ် ဆိုရင် မိုးတွင်းနားရတယ်။ အလုပ်မရှိတဲ့ အခါ ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအလုပ်ထက်လည်း ပို ပင်ပန်းတယ်။ အခု အလုပ်က နေ့ တိုင်းဆင်းလို့ရတယ်။ ပိတ်ရက်မရှိ တော့ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရပါတယ်”ဟု ဝန်ထမ်းတစ်ဦးက ယင်းအလုပ်အပေါ် ရွေးချယ်ဖြစ်မှု အကြောင်းကို ပြောပါ သည်။ ယင်း ဝန်ထမ်းများ၏ အလုပ် ချိန်မှာ မနက်ပိုင်းတာဝန် ကျသူ များအနေဖြင့် မနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအထိဖြစ်ပြီး ညပိုင်း တာဝန်ကျသူများမှာ ညနေ ၆ နာရီ မှ မနက် ၈ နာရီအထိဖြစ်သည်။
အကြောင်းမှာ ဇွန်လ (၁၀) ရက်နေ့ နေ့စွဲပါ ပြည်မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အောင်ဇော်ထက်၏ စာကြောင့်ပင်ဖြစ်တော့သည်။ “အသင်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခွင့် လျှောက်ထားမှုတင်ပြခြင်းကိစ္စ” ဟူသော အကြောင်းအရာပါစာအရ … ရည်ညွှန်းချက် (၁)ပါ အချက်အလက်များသည် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် အချက်များဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း မဟုတ်။ နိုင်ငံတော်မှငွေချေးခြင်းကိစ္စ မဟုတ်။ အများပြည်သူအကျိုးကို (အခမဲ့) ထမ်းဆောင်ပေးမည့် နိုင်ငံတော်အား တဖက်တလမ်း အကျိုးပြုမည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ရည်ညွှန်းချက် (၁/ခ) အရ - နိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်မှာ ယခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်ဆီ လျှောက်လှမ်းရာတွင် မလိုအပ်တော့ဟု၎င်း၊ လက်ရှိစီးပွားရေးကုမ္ပဏီကြီးများ လက်ရှိကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းများသည်၎င်း၊ နိုင်ငံရေး/ပါတီနိုင်ငံရေး ကင်းရှင်းပါ၏လားဟု စဉ်းစားမိသည်။
ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် လူမှုရေးသက်သက်သာ လုပ်ဆောင်နေ သော ပရဟိတလူငယ်စစ်စစ်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထူထောင်ထားသော မှတ်ပုံတင်အမှတ် (၁၈၉၇)နှင့် လုပ်ဆောင်ပေးနေသော လူမှုရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့မဟုတ်။ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ လူမျိုးဘာသာမရွေးတို့၏ နာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးကိစ္စများကို မိမိတို့ နိုင်သလောက် အင်အားနှင့် ကူညီဖေးမပေးနေသော နိုင်ငံတော်အား တဖက်တလမ်းအကျိုးပြုပေးနေသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ပေးပို့ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
Posted by ဒီမိုဝေယံ at Friday, June 10, 2011 Links to this post
ဧပြီလကတည်းကထုတ်ခဲ့သည့် မော်နီတာ ဂျာနယ်အထူးထုတ် ဘာအတွက်ကြောင့် အရောင်းသွက်နေဆဲလဲ ?.
စောင်ရေ ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ဧပြီလကထုတ်ဝေခဲ့သော မော်နီတာဂျာနယ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အထူးထုတ်မှာနှစ်လနီးပါးခန့် ကြာမြင့်လာ ပြီဖြစ်သော်လည်း ရောင်းကောင်းနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဂျာနယ် ရောင်းသူများက ပြောသည်။
အနီရောင်တောက်တောက်မျက်နှာဖုံးဖြင့် ထုတ်ဝေထားသော ၎င်း စာစောင်မှာ မော်နီတာဂျာနယ် အမှတ်စဉ်(၁)မှ (၅၀)အတွင်း ပါရှိပြီး ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများကို စုစည်းထုတ်ဝေ ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှ ဂျာနယ်ရောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်သော ဦးသိန်းဌေးက စထွက်သည့်နေ့မှ ယခုအချိန်အထိ တစ်ပတ်လျှင် စောင်ရေ ၅၀ ခန့် ရောင်းချ နေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
"၀ယ်တဲ့သူတွေက အသက်အရွယ်စုံ လူစုံပဲ။ တော်တော်များများက သူတို့ မိသားစုတွေပြဖို့ ၀ယ်တာများတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေက ပျောက်နေတာကြာပြီလေ။ ကျွန်တော်တို့မမီလိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးပါတယ်။ "ကျွန်တော့ ကလေးတွေကိုလည်း ပြတယ်။ တချို့ဆို ဗိုလ်ချုပ်ကိုကြားရုံပဲ ကြားဖူးတယ်၊ မမြင်ဖူးကြဘူး။ ခုဆိုရင် လေးကြိမ်မြောက် ရိုက်တာ ထင်တယ်" ဟု အသက် ၅၄ နှစ်အရွယ် ဦးသိန်းဌေး က ပြောသည်။
၎င်းက ဖြန့်ချိရေးမှ တစ်စောင်လျင် ၅၅၀ ဖြင့်ဝယ်ကာ ၁,၀၀၀ ဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချကာ အမြတ်အစွန်းများစွာရကြောင်း ပြောသည်။
ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် အနီး ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်တွင် ဂျာနယ်ရောင်း ချနေသော ဦးဌေးလွင်က "ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း တော်တော် လေးကို စုံစုံပါတယ်။ တခြားနေရာတွေမှာ ဒါမျိုးတွေ့ရဖို့ ခက်တယ်။ လူကြီးပိုင်းတွေအ၀ယ်များတယ်။ လူငယ်ပိုင်းတွေရှိပေမယ့် နည်း တယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဒါက သတင်းပုံစံ မဟုတ်တော့ အချိန်မရွေးဖတ်လို့ရတယ်။ ဟောင်းမသွားဘူး"ဟုဆိုသည်။
"ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်း ကြိုက်တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ပဲလေ"ဟု အသက်၂၁ နှစ်အရွယ် ဦးသိန်းဌေး၏ သားဖြစ်သူက ပြောသည်။
ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ မြသော်တာ စာပေဖြန့်ချိရေး၏ပိုင်ရှင် ဦးမောင်မောင်စန်းကလည်း ဂျာနယ်မထွက်မီ နမူနာပုံစံ မြင်သည့် အချိန်ကတည်းက စောင်ရေ တိုးမြှင့်မှာယူခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။ ပုံမှန် တစ်ပတ်လျှင် မော်နီတာစောင် ရေ ၂၀၀ သာရောင်းချရ သော်လည်း အထူးထုတ်အတွက် ယခုချိန်ထိ ၁,၅၀၀ ခန့် ရောင်းချပြီးဖြစ်ကာ အများစုမှာ နယ်ပို့ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
"မြ၀တီနှင့် မူဆယ်ကို ၂၀၀၊ ပုသိမ်ကို ၃၀၀ ပို့ပေးရတယ်။ မြိတ်ရောပဲ။ ပုံမှန် အတိုင်းဆိုရင် တစ်ပတ်ကို ၂၅ စောင် လောက်ပဲ ယူကြတာ"ဟု ပြောသည်။
လက်ပွေ့သမားများထံမှ ၀ယ်လိုအားများ တိုးမြင့်လာသော်လည်း ဈေးနှုန်းကို ပုံမှန် ၅၅၀ နှုန်းဖြင့်သာ ရောင်းချပေးကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မော်နီတာအထူးထုတ်ကိုသာ သီးသန့် လက်ပွေ့အနေဖြင့် ရောင်းချနေသော ကိုစိုးပိုင်က လွန်ခဲ့သည့်ရက်သတ္တပတ်က စောင်ရေများ ပြတ်တောက်သွားရာ မေလ ၂၆ ရက်နေ့မှ ပြန်လည်ရရှိကြောင်း ပြောသည်။
"တစ်စောင်ကို ကျပ် ၁,၀၀၀ ကနေ ၁,၅၀၀ အထိ လူပေါ်မူတည်ပြီး ရောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အလယ်က ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ မျက်နှာပြည့်ပုံကို ပလတ်စတစ်လောင်းထားပြီး နံရံမှာချိတ်ထားတယ်။ တခြားပုံတွေကိုလည်း စာအုပ်မျက်နှာဖုံးအနေနဲ့ ချုပ်ထား တယ်"ဟု အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ကိုစိုးပိုင် က ပြောသည်။
သို့ရာတွင် စထွက်ချင်းတွင် တစ်ရက်လျှင် စောင်ရေ ၃၀ ခန့်ရောင်းချရရာမှ ယခု ၁၅ စောင်ခန့်သာ ရောင်းချရတော့ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ရှိ ထွန်းဦးစာပေ ဖြန့်ချိရေး ပိုင်ရှင် ဦးလေးထွန်းဦးကမူ မော်နီတာ အထူးထုတ်မှာ မကြုံဖူးလောက်အောင် အရောင်း အ၀ယ်သွက်ခဲ့သော်လည်း မေ လ ၂၄ ရက်နေ့၌အရောင်းရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
"လူတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ကြခင်ကြတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ရှားပါးဓာတ်ပုံတွေကို သိမ်းထားချင်ကြတယ်။ အဲဒီမှာလည်း အကုန်လုံး တစ်စုတစ်စည်းတည်းပါတယ်"ဟု ဦးထွန်းဦးက ပြောသည်။ ထိုသတင်းအားမြန်မာတိုင်းဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, June 07, 2011 Links to this post
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က မပြီးပြတ်သေးတဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်တန်းမှုတွေကိုအခုတလောမှာ မြန်မြန်ထက်ထက်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနေတဲ့အထဲ NDF နှစ်ခြမ်းကွဲအမှုလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ သင်္ကန်းကျွန်းဦးသိန်းညွန့် ရှုံးပြီး ဦးခင်မောင်ဆွေတို့ အသာရသွားကြတယ်လို့ ရှုမြင်နေကြပါ တယ်။ ခေါင်းပေါ်က ခမောက်ပြုတ်ပြီး တစ်သီးပုဂ္ဂလအမတ်ဦးသိန်းညွန့် အဖြစ် ကော်မရှင်က အတည် ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်လမ်းအစက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတည်းက ပျိုးခဲ့ကြတာပါ။ NDF ရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးအ၀င်အထွက်ကိစ္စတွေကို ဦးသိန်းညွန့် က မီဒီယာအပေါ် ဖွ လို့ ဆိုပြီး မကြည်မလင်ဖြစ်ကြရာက “ဆွေငြိမ်း”ခေါင်းဆောင်တွေက ပါတီစည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုနဲ့ ကော့ကရိတ်ဦးသိန်းညွန့် ကို ပါတီက ထုတ်ပစ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီတုန်းက ပြည်ပမီဒီယာတစ်ခုနဲ့ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲမှာ လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် ကြံ့ဖွံ့ ပါတီက၀င်ပြိုင်မယ့် ဇေကမ္ဘာဦးခင်ရွှေဆီက ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို NDF ပါတီအနေနဲ့ ရယူခဲ့ပါသလားဆိုတဲ့အမေးခွန်းကို ဥက္ကဌဦးသန်းငြိမ်း ဖြေရှင်းသွားတာနားထောင်လိုက်ရပါတယ်။
“ဆွေငြိမ်းတို့ နဲ့ နိုင်ငံရေး တွဲမလုပ်နိုင်ဘူး” လို့ လည်း ဦးသိန်းညွန့် က နောက်ပိုင်းမှာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းကော်မရှင်ရုံးကလည်း ပက်သက်ဆက်စပ်သူတွေကို ခုံရုံးဖွဲ့ ခေါ်ယူစစ် ဆေးခဲ့ ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကော်မရှင်က မဆုံးဖြတ်ခင်ကတည်းက ဦးသိန်းညွန့် ကို တစ်သီး ပုဂ္ဂလိအမတ်အဖြစ်အတည်ပြုပေးလိမ့်မယ်လို့အားလုံးကသဘောပေါက်ပြီးသားပါ။ မီဒီယာတွေကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် (NLD)က ခွဲထွက်သွားတဲ့ ပါတီဆိုပြီး NDF ကို ၀ိုင်းဝန်းဝေဖန်ခဲ့ပြီး ငွေရေးကြေးရေးကိစ္စကို တူးဆွထိုးနှက်ကြပါတယ်။ မှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာထက် ဒီလိုသတင်းတွေကို ဖော်ထုတ်ကြ၊ဖတ်ကြရတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။
အခုလည်း ဒီနှစ်မကုန်ခင် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ ပါတီတွေက ပြောဆိုနေတုန်း ပါတီခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဆီက သတင်းတစ်ခု ကြားရပါတယ်။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကျားဖြူပါတီ (ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ)က သူတို့ ရှမ်းပြည်မှာတင်မကဘဲ မြေပြန့် တွေမှာပါ အမတ်နေရာတော်တော်များများ ၀င်ပြိုင်တော့မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကိုလည်း ကျားဖြူပါတီက တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြင်ပမီဒီယာတစ်ခုကို ပြောဆိုသွားတာ နားထောင်လိုက်ရပါတယ်။ လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးလောကမှာ သိုးသိုးသန့် သန့် ထွက်လာတဲ့ ကျားဖြူပါတီနဲ့ ပက်သက်ပြီး လျှံကျလာတဲ့သတင်းတွေက အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအုပ်စုအတွက် စိတ်ပျက်စရာပါ။ အထူးသဖြင့် ပြည်တွင်းမှာ အုပ်စုအတောင့်တင်းဆုံးလို့ ခေါ်ရမယ့် (၁၁)ပါတီစုစည်းထားတဲ့ “ဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများအဖွဲ့ ”အပေါ် လူထုအနေနဲ့ ရှုမြင်သုံးသပ်မှုတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာပါဘဲ။
နိုင်ငံတော်သမ္မတက အစိုးရ၊ အတိုက်အခံသဘောထားမျိုး မထားကြဖို့ ဘယ်လောက်ဘဲ ပြောပြောလွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်နေရာ မဆိုစလောက်သာ ရထားကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ်ဒီမိုကရက်တစ်အတိုက်အခံတွေအဖြစ် သဲသဲကွဲကွဲခံယူထားဖို့ လိုပါတယ်။ အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရဟာအရင်စစ်တပ်အစိုးရအမွေကို ခံယူထားတဲ့ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီအစိုးရလို့ ဘဲ မြင်ပြီး အတိုက်အခံအလုပ်တွေကိုပီပီသသလုပ်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ အာဏာရပါတီကတော့ စကားလုံးလှလှပြောမှာဘဲ။ သူ့ နေရာ ၀င် လုမခံရအောင် တခြားပါတီ၊ တခြားအုပ်စုတွေကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ သွေးဆောင်ဖြားယောင်းမှာပါဘဲ။
သူတို့ပြောသလို ဒီမိုကရေစီအပင်ပေါက်ဘ၀မှာ လွှတ်တော်ထဲက ဒီမိုကရက်တစ် အင်အားစုတွေ သင်းသတ်ခံမထားရဖို့ လိုပါတယ်။အာဏာရပါတီနဲ့အုတ်ရောရောကျောက်ရောရော ဟီးဟီးဟားဟား လုပ်နေရင် မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ ဒဏ်ခတ်ခြင်း ခံရပါလိမ့်မယ်။ ရာဇ၀င်ရဲ့ တရားခံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလှတဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ပြည်သူလူထုကြီးက တမ်းတမြင်ချင်နေတာပါ။
စီးပွားရေးသမား စီးပွားရှာတာ ပုံစံမျိုးစုံသုံးခွင့်ရှိပါတယ်။ ငွေရဖို့သူက ဘာပေးရပေးရ ပေးမှာဘဲ။နိုင်ငံရေးသမား စီးပွားရှာတဲ့အခါ သူ့ မှာ ပေးစရာဆိုလို့ နိုင်ငံရေးတစ်ခုဘဲရှိပါတယ်။ နုနယ်လွန်းတဲ့ဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအခင်းအကျင်းမှာ အတော်လေးသတိထားမှ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေအ၀ယ်မခံရဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ပါတီကို ကိုယ် မရောင်းစားကြပါနဲ့ ။ ဒီခေတ်က သတင်းတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စီးဆင်းနေတဲ့ခေတ်၊ ငါလုပ်တာ ဘယ်သူမှ မသိဘူး မှတ်နေရင် ကွဲ သွားလိမ့်မယ်။
အခုလည်း ကျားဖြူပါတီဥက္ကဌ ဦးစိုင်းအိုက်ပေါင်းက ယခင်ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနနေရာကို လေလံအောင်ထားပါတယ်။ ငွေကျပ် ၂၁ဘီလီယံနဲ့ ဝယ်ယူခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်အစိုးရက လေလံပစ်တဲ့မြေအဆောက်အဦတွေထဲမှာ ဒုတိယတန်ဘိုးအများဆုံးဖြစ်ပြီး ခရိုနီစီးပွားရေးသမားကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးတေဇ၊ ဦးဇော်ဇော်တို့ တောင် လက်ရှောင်နေခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီလေလံအောင်တဲ့နေရာကို အမြတ်ငွေဘယ်ရွေ့ ဘယ်မျှပေးရင် လက်လွှဲရောင်းချမယ်လို့ လည်း သတင်းတွေကြားရပါတယ်။
ကျားဖြူဥက္ကဌမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အစကတည်းက ရှိထားတယ်လို့ သိရပေမယ့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အစိုးရရဲ့ လေလံမှာ ဒီလောက်များပြားတဲ့ငွေတန်ဘိုးနဲ့ မရ ရအောင်ဝင်ဆွဲသွားတာကတော့ ပါတီဓနအင်အားတောင့်တင်းရေးအတွက် လုပ်ရပါတယ် ဆိုတဲ့ဆင်ခြေ ပေးနိုင်ပေမယ့် ပြည်သူတွေ လက်သင့်ခံဖို့ မလွယ်လှပါဘူး။ လူထုရဲနိုင်ငံရေး ယုံကြည်ကိုးစားမှု ဟာနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်အတွက် အသက်သွေးကြောပါ။ သတင်းမီဒီယာသမားတွေအနေနဲ့ လည်းကိုယ့်လူ၊ သူ့ လူ သဘောမထားဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးရံပုံငွေနဲ့ ရပ်တည်မှုဝင်ငွေတွေကို အခွင့်ရရင် ရသလို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြည်သူလူထုကို အသိပေးရပါမယ်။
နိုင်ငံရေးသမားတွေအနေနဲ့ လည်း ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပက်သက်ရင် ထိန်ဝှက်မထားဘဲ လိုအပ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့အချိန်မှာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကို ထုတ်ဖော်အသိပေးသင့်ပါတယ်။ ငွေတစ်ပဲခြောက်ပြားနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီထူထောင်ပြီး အာဏာနိုင်ငံရေးလုပ်လို့ လည်း မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘာကဘယ်လို၊ ဒါကဘာ့ကြောင့်ဆိုတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို ပြည်သူလူထုက အသည်းခိုက်အောင် ကြိုက်ပါတယ်။
အဲဒီလိုမျိုးတွေကို မဲဆန္ဒရှင်တွေက တွေ့ ချင်ကြတယ်၊ ကြားချင်ကြတယ်၊ မြင်ချင်ကြတယ်။
၆- ၆- ၂၀၁၁
(ပူးတွဲပါဇယားမှာ VOL7NO 2O THE FLOWER NEWS တွင် ဖော်ပြထားသော ပုဂ္ဂလိကပိုင်
ပြုလုပ်ရေးကော်မရှင်မှ ထုတ်ပြန်သည့်စာရင်း ဖြစ်ပါသည် )
ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြို့ နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး (ကြံ့ ဖွတ်) ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်သန်းဦးစစ်ဆေးခံနေရ.
ရန်ကုန်တိုင်း သန်လျင်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုး (ကြံ့ ဖွတ်) ပါတီမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုန်သည်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်သန်းဦးအား မြေယာအလွဲသုံးစားလုပ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့သို့ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် တိုင်ကြားမှု ပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်တောင်စုကြံ့ခိုင်ဖွင့်ဖြိုးရေး (ကြံ့ ဖွတ်) ပါတီမှ သန်လျင်မြို့ နယ် မဲဆန္နနယ်အမှတ် (၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်သန်းဦးသည် သန်လျင်မြို့ နယ် ဘုရားကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ သီလ၀ါ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းသို့သွားရာ လမ်းမကြီးဘေးရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်းများကို ခရက ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းနှင့် ပေါင်းကာ ရယူခဲ့ကြောင်း၊ ၄င်းမြေတစ်ဧကအတွက် ခရကဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဝင်းအား ငွေကျပ် (၁၅) သိန်းပေးခဲ့ပြီး၊ နောက်ထပ်ငွေ ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ကိုလည်း ထပ်မံပေးခဲ့ကြောင်း သတင်ရရှိပါသည်။
ဤသတင်းအား မျှဝေ ပေးပို့ ပေးသော ကိုနစ်နေမန်းအားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။